Ny maha-zava-dehibe ny fananana Backup ary fitaovana sasany hanatanterahana azy ireo | Avy amin'ny Linux
Roa andro lasa izay dia namoy angon-drakitra manan-danja be dia be izay nananako tamin'ny kapila mangatsiakan'ilay Laptop. Omaly, very ampahany lehibe amin'ny mailako aho. Fa maninona? Ho an'ny tsy fananana tahiry tompon'andraikitra amin'ny angon-drakitra.
Nanomboka izany tamin'ny fanavaozana ArchLinux, iray amin'ireo fonosana nohavaozina dia nifanohitra tamin'ny ambiny ary rehefa namerina aho dia tsy afaka niditra tamin'ny fotoako, raha ny marina dia tsy natomboko ny X.
Araka ny efa nolazaiko, ny vahaolana natolotr'izy ireo ahy ao amin'ny ArchLinux dia ny hametraka indray ny System, ka nanomboka nanao izany aho. Tezitra, saro-kenatra ary maika, tsy hitako ny filaharan'ny fizarako ary niafara tamin'ny SWAPing ny fizarazako Data (/ trano).
Tao anatin'ny iray segondra ny zava-drehetra. Soa ihany, andro vitsy lasa izay, nanao kopia marina ny angon-drakitra nataoko tamina kapila ivelany aho ary afaka nahazo ny ampahany betsaka tamin'ny entako.
Fa ny lahatahiry ampiasainao KMail raha te hitahiry ireo hafatro dia tsy nakanana tsara, zavatra tsy azoko hazavaina satria matoky 100% aho fa novonoina tsara i Rsync.
Faran'ny tantara: very rakitra manan-danja maro sy mailaka an'arivony aho. Fa maninona Noho ny hadisoan'ny olombelona, ​​fa indrindra noho ny tsy nanaovana backup ny data-ko.
1 Ahoana no hisorohana an'izany?
2 Manao ny mitsitsy
3 Fitaovana grika
Ahoana no hisorohana an'izany?
Mazava ho azy, satria ny fomba tokana hahavery ny angona dia amin'ny fananana backup ary mazava ho azy, noho izany dia tsy maintsy manana ny loharano ilaina isika, na fitaovana (HDDs, Flash Memories, DVD), toy ny Internet raha te hatoky ny Cloud.
Raha tsy manam-bola hanaovana famonjena isika, dia iharan'ny fahafatesan'ny olona iray. Saingy OK, ndao lazaina fa manana ny loharanon-karena isika. Ahoana no fomba ahazoantsika mitsitsy?
Manao ny mitsitsy
En GNU / Linux Manana rindranasa marobe izahay hamoronana backup amin'ny fisie. Andao jerena ireo karazana hafa sy fomba hafa.
Ity fitaovana ity no fomba mahomby indrindra hanatanterahana ny tahirintsika, indrindra noho ny heriny ary satria apetraka amin'ny ankamaroan'ny fizarana. GNU / Linux.
Tandremo anefa! Raha tsy ampiasaina tsara dia mety ho ratsy kokoa noho ny aretina ny fanafody. Ireo ohatra roa asehoko etsy ambany, na dia mitovy aza ny endrik'izy ireo: TSY IZANY.
$ rsync -av / folder / loharano / fampirimana / toerana $ rsync -av / folder / source / / folder / toerana
Ny bar dia afaka manova ny fiainantsika. Amin'ny tranga voalohany dia handika ny fampirimana izy io loharano ao anatin'ilay fampirimana toerana halehany, fa amin'ny tranga faharoa, handika ny atiny avy ao amin'ilay fampirimana loharano, ao anatin'ny fampirimana toerana halehany.
Mba hisorohana ny lesoka dia mandika lahatahiry iray manontolo foana aho. Ohatra, ny lahatahiry / tranoko.
Raha manana mpizara azontsika idirana amin'ny alalàn'ny SSH isika dia afaka mampiasa zavatra toy izao:
Mila manendry ao amin'ny Cron fotsiny isika isaky ny te-hihary ny fisie. Ny zavatra tsara momba an'i Rsync dia, raha tsy lazaintsika hafa izany, dia tsy handika ireo rakitra izay mitovy satria mijery ny daty sy ny habeny.
Azo antoka fa hisy olona maniry sary bebe kokoa hatrany. Linux Mint tokony mintbackup, fitaovana ampiasainy hamonjy ny angon-drakitra misy anay.
Ubuntu Izy io koa dia manana ny fitaovana hampiasany ity karazana lahasa ity (heveriko fa Deja-Dup) ary manana fampiharana toa antsika isika bacula, raha te-hamerina ny angon-tsainay amin'ny tamba-jotra izahay.
Fitaovana mahaliana hafa mety ho BackupPC y Let-dup:
Raha fintinina dia misy maro hafa, resaka fifidianana fotsiny ilay ilaintsika. Mampiasa ny iray amin'ireo ve ianao? Sa inona no zava-dehibe kokoa, angoniny ny angon-drakitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny maha-zava-dehibe ny fananana Backup ary fitaovana sasany hanatanterahana azy ireo
Raha ny ahy dia tsy mila an'io aho, ny fampiasako ny rafitra dia tsotra dia tsotra, ny angon-drakitra rehetra amiko, matetika mozika, horonan-tsary, antontan-taratasy, sary, tahiriziko ao anaty / media / Data
Tsy mampiasa / mody na oviana na oviana aho hitsitsiana na inona na inona ka tsy ataoko misaraka.
Tsy mampiasa mpamaky mailaka aho, mandeha amin'ny mailaka amin'ny alàlan'ny browser, tsy mampiasa mpamaky RSS, mitovy, mandeha tsirairay amin'ny blogroll-ko amin'ny alàlan'ny browser sns sns.
Raha indray andro dia hita ny antony / fotony na inona na inona antony, tena tsy manana zavatra very mihoatra ny rafitra mihitsy aho, fa tsy angona manokana.
Misaotra compa. Fa antsipiriany iray, ahoana raha tapaka ny HDD? Tsy vitan'ny backup fotsiny mba hamonjy ny fizarazaran / trano, fa ny HDD manontolo 😀
Ny fomba tsara indrindra ahazoana antoka ny angon-drakitra dia ny fizarazarana amin'izany fomba izany,, / media / data kosa dia mbola mahatsapa ho anisan'ny faka xD ahaha
Mazava ho azy fa teboka iray fotsiny napetraky ny iray fa tsy raharaha lehibe 😛
Ho ahy manokana, manana ny angon-drakoko momba ny kapila mafy ivelany misy hadalana aho, amin'ity fomba ity dia tsy misy afaka miditra amin'ny angon-drakitrao, ary amin'ny PC dia manana ilay fampirimana vaovao izay afindraiko amin'ny dd ivelany rehefa manam-potoana aho. Ka miditra amin'ny rakitrao avy amin'ny pc, solosaina finday na fitaovana hafa aho nefa tsy mibahana Internet, rahona, pcs sns.
Data momba ny fomba hanaingoana ny dd ivelany:
Ny sisa ho ahy dia ny manana dd ivelany hafa raha toa ka tsy mahomby ny iray.
Tena nahomby ny fanehoan-kevitrao @elav, efa indray mandeha aho no niseho tamin'ny HDD ary namoy ny data rehetra nataoko
Ho an'ireo izay tia GUI, ity freeFileSync ity, mahery vaika ary misy safidy toa ny fanindrahindrana roa tonta, na ny fisafidianana izay rakitra tsy ampifanarahana, ankoatry ny hafa.
goidor dia hoy izy:
Ny safidy hafa dia ny mamorona mpizara anao ao anaty rahona amin'ny alàlan'ny fisintomana ny Owncloud. http://owncloud.org/
Mamaly amin'ny goidor
ToolMovi dia hoy izy:
Misy ny interface graphique ho an'ny rsync antsoina hoe grsync, ho an'ireo izay tsy mahazaka konsol na ho mora tsotra.
Valiny tamin'i HerrMovi
Toy izany koa. Misaotra anao nanome ny vaovao.
ac_2092 dia hoy izy:
Zava-dehibe hatrany ny famerenana ny angon-drakitra.
Raha voafafa tsy nahy angon-drakitra na fizarazaranana ianao ary te-hamerina azy ireo, dia azonao atao ny mampiasa Photorec hamerenana ireo rakitra na Testdisk izay azo ampiasaina hamerenana ireo fizarazarana voafafa. Ireo rindranasa roa ireo dia tena mandaitra ary hita ao amin'ny trano fitahirizana.
Valiny amin'ny ac_2092
Ie, fantatro izy ireo, ny zava-mitranga dia i Photorec mamerina zavatra misy anarana hafahafa, misavoritaka ny zava-drehetra ary rehefa very vaovao 250GB ianao dia lasa somary sarotra ny zava-drehetra hahaha.
Misy ve ny rindranasa izay mitovy amin'ilay manana fikandrana hamerina ilay rafitra amin'ny fanjakana teo aloha?
Cocolium dia hoy izy:
"Nanomboka izany rehetra izany rehefa nanavao ny ArchLinux, ny iray amin'ireo fonosana nohavaozina dia nifanohitra tamin'ny ambiny ary rehefa natomboka indray dia tsy afaka niditra tamin'ny fotoako aho" Izany no antony halako Linux amin'ny birao, izany ary ny kalitaon'ny "mpanara-maso" lany ny an'ny mpanamboatra.
Fa amin'izao fotoana izao ny zavatra tsara indrindra dia ny manaova kopia voafafa hatrany amin'ny angon-drakitra satria misy rafitra, na fitaovana na rindrambaiko mora ihodinana, dia manome soso-kevitra koa aho fitaovana iray antsoina hoe BitTorrent Sync izay miasa na dia amin'ny finday aza, ary zavatra manan-danja koa satria ampiasao betsaka.
Rsync dia programa tena tsara, na dia mbola tsy mahatanty izany aza aho. Izy io koa dia misy interface graphique izay grsync (na dia tsy azoko aza izany dia mbola tsy atokisako).
Ny programa ampiasako hananana kopia voafafa ao amin'ny data dia Unison (miaraka amin'ny interface graphi unison-gtk). Manoro hevitra azy aho satria tena intuitive io. Ny fotoana voalohany ampiasana azy dia maharitra ny fotoana hijerena ny zava-drehetra, fa amin'ny fampiasana manaraka azy dia haingana be toa an'i rsync.
"Ny hany fomba famoahana data dia ny fananana backup" ... Salama?
(Misy miteny amiko ny fomba fanaovana teny nalaina tao amin'ny hevitra, misaotra)
Indraindray io zavatra io ihany no nanjo ahy (nametraka fonosana tamin'ny debian aho ary rehefa natomboka indray ilay izy dia nivadi-pinoana), fa resaka fidirana fotsiny amin'ny livecd sy fikafika ny debian system, fanamafisana ny tamba-jotra, fanesorana ny fonosana maloto, fametrahana ilay taloha sy voila, rehefa manomboka indray aho dia manomboka tsy misy olana.
Heveriko fa ny lesoka voalohany nataonao dia ny fametahana indray hahaha (ilay faharoa mazava ho azy fa endrika format any an-trano XD), ka fantatrao ho an'ny manaraka, avereno averina fa na tao anaty lava-bato izahay niaraka tamin'ny win2 = P Na marina ny lazanao momba ny maha-zava-dehibe ny backup.
Eny, niaraka tamin'ny Back in time aho nanomboka tamin'ny 2009 http://backintime.le-web.org/ izay mampiasa rsync sy rohy mafy miaraka amina tontolon'ny sary tsotra nefa misy heriny amin'ny fomban'ny Apple's Time Machine.
Vao tsy ela izay dia mila fitaovana toy izao aho, tsy hanao backup fa satria te-hamindra ny data-ko amin'ny kapila mangidy hafa dia nanandrana niaraka tamin'i MintBackup sy Grsync aho fa samy tsy nahavita ilay asa, dia nihantona foana i MintBackup rehefa nanandrana naka tahaka ny sasany. ataovy ao anaty fampirimana miafina, ary niadana be i Grsync ka tsy fantatro tsara hoe nahantona izy na mbola miasa, satria na dia hitako aza ny hetsika tamin'ny kapila mafy dia tsy nandroso nandritra ny ora maro ny fizotrany. Ary farany dia niresaka tamin'ny "cp" tsotra aho izay nandika ny rakitra rehetra momba ny daty sy ny toetra ankoatry ny famitana azy io tao anatin'ny adiny iray.
Nanomboka teo dia hadinoko ny momba ny fitaovana misy sary raha asa sarotra sy manan-danja.
Misaotra ny lahatsoratra fa nilaiko izy 🙂 Heveriko fa ny baiko (ampiarahana amin'ny ssh) dia azo ampiana amin'ny cron. Misy fomba ahafahako mamantatra ireo fanovana ao anaty lahatahiry ary hamerina azy io? Ho tsara indrindra.
Tsy mampiasa fitaovana backup aho fa mandefa lahatahiry manontolo fotsiny ary raha hitako fa tsy mila zavatra intsony aho na feno ny kapila dia mamafa azy ireo aho. Manana kopia vitsivitsy amin'ny kapila roa sy fizaran-tany samy hafa aho.
Taorian'ny viriosy iray izay nameno ny Windows (rehefa nampiasaiko io) dia nianatra ny lesona nianarako ary nanomboka teo dia teo amin'ny kapila mafy ivelany ny rakitra rehetra.
Ankehitriny rehefa ato amin'ny Linux aho ary nanjary "tia" ny famolavolana sy ny fametrahana indray dia ampiasaiko matetika ny kapila mafy ivelany: satria ny fisie vao misintona dia mankany amin'ny folder Downloads, rehefa hitako feno dia afindrako ireo rakitra mankany amin'ny kapila mafy ivelany. Amin'ity fomba ity dia ho very ny rakitra farany anao raha sendra nianjera ny kapila mafy nataonao.
Na dia mety ho simba koa ny kapila mafy ivelany ary mahafaty ahy 😉
Ny marina dia tsy tsapako mihitsy hoe zava-dehibe ny fananana tahiry nomaniny ho solon'izay rehetra angon-drakitrao na farafaharatsiny izay tena manan-danja indrindra.
Elav, andramo: # rsync -arvz
Déjà Dup dia efa nampiasa azy io efa an-taonany maro. Avelako ihany koa backups misy encrypty raha heveriko fa izany.
Mandao partition / an-trano foana aho. Ny famakiana ilay lahatsoratra dia mahita hadisoana tsy ampoizina sy tsy azo inoana loatra aho. Tsy mandany vola akory ny fanaovana na dia ny kopian'ny taratasy aza, mihoatra ny zava-drehetra dia mbola analogy ny fitantanan-draharaham-panjakana.
Mba hamerenana ireo rakitra very ao amin'ny linux (na dia natao fisolokiana aza ny fisarahana): http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_ES.
Rafitra famerenam-bidy tsara, amin'ny maody sary ary miorina amin'ny rsyn ary izany, ho fanampin'izany, dia ao amin'ny trano fitehirizan'ny ankamaroan'ny fizarana: http://luckybackup.sourceforge.net/
Valiny tamin'i Charly
Bacula no ampiasaiko, avelako ho anao ireo lahatsoratra nosoratako momba azy:
Avy amin'ny perla nanomboka androany aho mikasa ny hividy Notebook vaovao ary hariana ilay taloha. Saingy tsy azontsika atao ny mametaka ireo rakitra ananantsika eo amin'ny rafitra mankany amin'ny kapila mangarahara fotsiny? Tena ilaina ve ny mampiasa fitaovana backup manokana?
Mazava ho azy fa afaka mampiasa CP ianao, fa raha te hanao kopia "azo antoka" dia tsara ny mampiasa Rsync noho ireo safidy isan-karazany atolotray.
Iza eto no matoky serivisy rahona? 🙂 Mampamangy.
Fampianarana tena tsara, tsotra nefa mahomby. Ankehitriny rehefa nividy HDT ivelany 1TB aho dia afaka manao backup hafa ao an-tranoko.
Tsy trolling izany fa ahoana no ahazoanao kopia fiarovana isan'andro amin'ny kapila 1Tb ???
Efa ela aho no nandinika fampiharana maro mba hamerenako ireo nomaniny ho solon'izay. Tsy maka tahaka ny pejy fandraisam-bahiny feno aho fa ampiako ireo lahatahiry sy rakitra ilaiko adika ary koa esoriko ilay hafahafa, noho izany rehetra izany dia mampiasa sehatr'asa miverina ho an'ny rsync aho izay afaka miasa tsara ary afaka mamorona mora foana ny backups, andramo izany.
Raha voahidy ny rafitra dia manomboka amin'ny livecd aho ary mahazo izay tokony hivoaka. Zavatra iray hafa raha toa ka voageja ny HDD, soa ihany fa saika manana ny zava-dehibe rehetra ao amin'ny Dropbox aho, ny tena ho very dia ny pr0n
Ny zava-dehibe indrindra ao amin'ny Dropbox? Oo
Hehehehe tsara, aleo manantena ny mpiara-miasa fa efa nanao encrypt azy farafaharatsiny alohan'ny nampakarany azy 😀
Misaotra tamin'ny fampahatsiahivana ary nanolotra vahaolana. Miarahaba.
Mba hisorohana ireo programa kely ireo, ny zavatra tsara indrindra sy feno ary mahaliana indrindra dia ny fametrahana ao anaty raid1; manao an'izany aho amin'ny debian na arch rehetra, ary apetrako ny cryptography sy ny LVM. Mora tokoa ny manao azy, mamporisika mafy aho izany.